Indhaha Cadaadiska iyo OLED: Runtu waxay tahay inay ka sii xun tahay - Nalalka MediaLight eexda
Haddii aad tahay midab-yaqaan xirfadle ah ama tifaftire fiidiyow ah, waad ogtahay in culeyska indhaha uu xitaa uga sii xumaan karo OLED marka loo eego tikniyoolajiyadaha kale ee muujinta. Laakiin haddii aad kaliya tahay qof daawada TV-ga xiisaha badan, waxaa jira fursad wanaagsan oo aan waligaa kugu soo dhicin. Sababta tan ayaa ah maxaa yeelay isha oo adkaata waxaa sababa farqiga u dhexeeya muuqaalada mugdiga ah iyo muuqaalka dhalaalaya ee shaashaddaada- taas macnaheedu waa markii aad ka daawaneysid waxyaabaha ku jira shaashadda 'OLED', ardaydaadu waxay si joogto ah u ballaadhiyaan oo ay ciriiri u yihiin sidii ay ula qabsan lahaayeen labada madow ee aadka u madow iyo caddaanka aadka u fudud. Dib-u-soo-noqoshada joogtada ah waxay indhaheenna ku abuureysaa culeys ka badan waxa dhaca marka la daawanayo waxyaabaha ku saabsan bandhigyada dhaqameed.
Kala duwanaanshaha aan dhammaadka lahayn ma sababi karo culeys indhaha oo aan dhammaad lahayn, laakiin wuxuu si aad ah uga sii xumaan karaa baararka LED-ka.
Markaa ma ahan oo keliya awoodda bandhigga, laakiin sidoo kale waxa ay muujineyso. Inta badan waxyaabaha jira looma qiimeynin bandhigyada OLED, sidaa darteed dadka madow wali waa lagu hagaajin karaa xaaladaha halka heerka madow ee ku jira ay ka sarreeyaan eber.
Kala-soocayaasha qiimeynta kormeerayaasha xirfadleyda ah ee OLED waxay sidoo kale u adeegsadaan iftiiminta eexda. Maahan tayada muuqaalka muuqaalka laakiin waa tan awoodda si loo arko tayada sawirka - waa sida (aan loo qorin) muraayadaha indhaha ay u wanaajin karaan aragtidayada marka aan baabuur wadno maxaa yeelay waxay sare u qaadeysaa awoodeena inaan ku aragno sawirada, oo umuuqda mid aad ufiican oo kafiican sababo laxiriirta qoto dheerida ardeyda ciriiriga ah.
Sidaad hadda ogtahay, OLED ma ahan farsamo aad u ifaya. Marka, sidee bay nalalka eexdu uga dhigayaan OLEDs inay u muuqdaan kuwo dhalaalaya? Aynu tusno tusaale.
Fagaarahee cadaankee u muuqda mid ifaya? Kan muggiisu jilicsan yahay ku wareegsan bidix ama midka midig?
Labadooduba waa heer dhalaal isku mid ah laakiin maskaxdeennu waxay u aragtaa laba jibbaarka dhanka bidix inuu ka ifayo.
Qofna ma oga waxa mustaqbalku dhici karo, laakiin waa la dhihi karaa tiyaataradayada guryaha ee hadda jira ayaa 10 sano laga dib dhici doonaa. Xusuusnow markii aan niri xitaa ma arki karno pixels-ka 1080p? Xusuusnow 1080i? Waxaan si cad u wada ognahay in sawirka uu ka sii fiicnaan karo maxaa yeelay marwalba wuu sameeyaa, sida awoodeena aan u kala soocno.
Tusaale ahaan, adigoo daba socda raadinta kale ee caanka ah ee keena martida boggayaga, "OLED haynta muuqaalka" iyo "OLED hooska xirashada" kama fog yihiin. Kuwani waa xaddidaadda tiknoolajiyada OLED ee hadda jira oo sidoo kale lagu yareynayo iftiinka saxda ah. Xitaa iyada oo aan lahayn xaddidaadahaas, waxyaabo badan oo ka mid ah looma qiimeynin muujinta OLED, maadaddani waxay ka faa'iideysataa iftiiminta nacaybka sidoo kale.
Joel Silver oo ka socda ISF wuxuu jecel yahay inuu sheego in qof walbaa uu leeyahay fikrado ku saabsan sida TV loo sameeyo, laakiin waxaa jira heerar qeexan oo laga aqbalo adduunka. Waxaan dhamaanteen xaq u leenahay doorbidyadeena sidoo kale. Markii aan ka shaqeynayay kumbuyuutarkayga shaqo aan midab-muhiim ahayn, waxaan dejiya laydhkayga eexasho aad uga sarreeya heerarka. Sababtoo ah nalalka eexdu waxay ka shaqeeyaan daawadayaasha oo kama shaqeeyaan TV-ga, waa caadi in la tijaabiyo si loo helo goobaha iftiinkaaga ugu habboon.
Haddii aad ku xanuunsato isha isha ee OLED, waxaan kugula talinay inaad hoos u dhigto iftiinka muuqaalkaaga ka dib markaad rakibto iftiinka nacaybka. Waxay u egtahay mid caqli-gal ah, laakiin hareeraha hareeraha iftiinka eexda ayaa ka dhigaya muuqaalka mid ifaya, marka uma baahnid inaad ku socodsiiso TV-ga heer aad u sarreeya.
article Previous Miyuusan leben ama midab midab leh “burburin” nalalka eexda saxda ah?
Next article MediaLight 6500K La Dhigay D65: Tayada Tixraaca, ISF-Shahaado La Siiyay D65 Eex Nalalka